မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: အချစ်နှင့် သွေးအမျိုးအစား
သွေးအမျိုးအစားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်းရေးဖူးတယ်။ ခုတခါကတော့ အချစ်နှင့် သွေးအမျိုးအစား။ ကဲ မှန်၊ မမှန် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးလိုက်ကြဦးနော်။ Gepostet von
your picture is very small. when it's zoom in, it was blurred. that's why it can't be read. please upload the large and clear picture. Thanks
ဟုတ်ကဲ့ အဆင်ပြေအောင် ဆိုဒ်ကို ကြီးလိုက်ပါပီဗျို ခုလို ကွန့်မန့် ရေးပြီးပြောသွားပေးတာ ကျေးဇူးနော် :)
အချိန်ရတုန်း လာလည်သွားတယ် ညီမရေ .. ။ ဖောင့်မရှိတော့ ဖတ်လို့တော့ မရဘူး။ လေးထောင့်ကွက်တွေချည်းပဲ။ အီးအိုတီ လုပ်မထားဘူးလား ဟင်။
တို့သွေးကလေ သိလား ပြောချင်ပါဘူးအေ. ပြောလိုက်တော့မယ်အေ . အေ ပါအေ. :D
အေသွေးလား ကိုတက်စ်ကအလယ်လယ် အချစ်ကြီးတယ်ဆိုပဲ ဂျစ်ကြီးကြီးနဲ့ ချစ်တော့လဲပေါ့ နော် အဟတ်ဟတ်>>မမေရေ EOT တော့ လုပ်ထားဖူးတာပဲ ဘာဖစ်တာလဲတော့ သိဘူးဗျ>>တူးတူးရေ သွေးချင်းတူတယ်ဆိုတော့ သွေးသောက်မဟုတ်တောင် အရောင်တူတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသောက် ညီအစ်မလုပ်မယ်လေနော်
အဲအဲ .. အချစ်အကြောင်းတွေ များနေပါလား .. ဗျကိုတိုး